» कुलमान घिसिङले हेटौँडामा के–के गरे ?
कुलमान घिसिङले हेटौँडामा के–के गरे ?
१३ जेष्ठ २०७६, सोमबार १५:२०
मकवानपुर, १३ जेठ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आईतबार प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडामा आईपुगे । उनी हेटौँडा आएकै दिन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरको विद्युत काटियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौँडाले आईतबार जनस्वास्थ्य कार्यालयको विद्युत काटेको हो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्यले करिब ४६ महिनादेखि महशुल नबुझाएपछि लाइन काटिएको थियो । मिटरमा एमसिबि नभएको र एमसिबि बाइपास गरिएको समेत फेला परेको प्राविधिक दिनेश खरेलले जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै हेटौँडा आएका कुलमानले प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्यतिमात्र होईन उलने गरिब तथा विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युतको मिटर वितरण गर्ने समेत घोषणा गरे । विपन्न र गरिबिको नाउँमा विद्युतको मिटर समेत किन्न नसकेका सबैलाई विद्युतको मिटर दिएर उज्यालोको पहुँचमा ल्याउने उनले प्रतिवद्धत्ता जाहेर गरे ।
स्थानीय तहको सिफारिसमा निशुल्क मिटर बितरण गरिने उनले बताए । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा उनले गरिब परिवाले पनि बिजुली बाल्न पाउने बनाउन लागिएको बताए । देशैभरीमा बिधुत बिस्तार गर्ने योजना अनुसार दुई बर्षमा १० लाख वटा नयाँ मिटर बितरण गरिएको उनले बताए । बिधुत बिस्तारको काम संगै उत्पादन पनि उत्तिकै भईरहेको उनले बताए । काठको पोलका स्थानमा फलाम र सिमेन्टका पोल फेर्ने अभियानमा प्राधिकरण लागिपरेको समेत उनले बताए ।
नेपाल बिधुत प्राधिकरणले बिधुतीय सवारीका साधन चार्ज गर्नका लागि देशका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अनुसार हेटौँडा आइपुगेका घिसिङले प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलसँग भेट गर्दै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेर त्यसबाट राज्यलाइ राजश्व संकलन गर्न सकिने समेत बताए । चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको समेत घिसिङले बताए ।
तीन थरीका बिधुतिय सवारीका साधन थोरै समयमा चार्ज गर्नका लागि स्टेशन तयारी गर्नेगरी काम सुरु गर्न लागिएको र काठमाण्डौंका केही स्थानमा तथा काठमाण्डौ बाहिर हेटौंडामा भएपनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने उनले बताए । जग्गा उपलब्ध गराएमा हेटौंडामानै चार्जिङ स्टेसन राख्न सकिने उनले बताए । हेटौंडादेखि मनहरीको लोथरसम्म जहाँ भएपनि चार्जिङ स्टेशनका लागि जग्गा उपलब्ध गराईने प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । अहिले भईरहेका पेट्रोल पम्प जसरीनै ब्याबसायीक हिसाबले चार्जिङ स्टेशन राखिने बताइएको छ ।